Nhau - Musiyano uripo pakati peyeraki-rakakiiwa sirinji uye siringi-rerufu
Luer-lock sirinji inoshandiswa zvakanyanya munyika dzekumadokero. Munyika zhinji dzichiri kusimukira, luer-slip syringe inonyanya kufarirwa nekuda kwemutengo wayo wakaderera.
Iyo luer slip dhizaini inotaridzika kuve yakapusa - unogona kungoivharira mukati. Asi izvi hazvisi zvekurerutsa, asi dambudziko rakakomba remakiriniki rine chekuita nekuti murwere anogona kupihwa dosi chaiyo uye nekuramba akatsiga kumukiswa kwezvinodhaka. Izvi zvakare zvinokanganisa kurapwa kwekupedzisira kwemurwere.
Kunyangwe iyo siringi-rakakiiwa sirinji inoda danho rekuwedzera kuti mukoti arimise risati rashandiswa, rinovimbisa kubatana kwakasimba uye chengetedzo kune vese varapi uye varwere. Kunyangwe iri yekubatanidza kune isina tsono infusion chinongedzo kana akasiyana mapaipi, iko kubatana hakuzo nyore kubviswa pasi pemamiriro akasiyana. Iyo inovimbisa iyo yese yekurapa maitiro anoenda mushe! Iyo inobudirira inodzivirira mikana yeasina kukodzera madhiragi emushonga, kupaza zvinodhaka, uye mweya embolism.
Mune anotevera makiriniki ekushandisa zviitiko, luer-Lock sirinji inokurudzirwa zvakanyanya:
1 Paunenge uchimisikidza mishonga ine chepfu, iyo inopindira dhipatimendi injove viscous zvinodhaka (senge lipiodol). Kana sirinji ikabviswa netsaona panguva yekushandisa, mishonga ine chepfu yakateuka netsaona.
2 Kana hemodialysis yakabatana nesirinji, zvinokonzeresa heparin kana kuyerera kweropa kubva muhubhu kana chinzvimbo chemurwere chikachinja ,;
3 Madhipatimendi uko mamwe madhiragi anoitiswa mukati meiyo intravenous bolus jekiseni, senge dhipatimendi rekukurumidzira, ICU, nezvimwe; iyo ichangobva kusimbiswa kupinda mukati inoda huwandu hwakawanda uye akasiyana majekiseni ejakisheni, senge furosemide kana BP kumanikidza mishonga. Iyo yekutanga dhizeti idiki. Kana sirinji ikabatanidzwa netsono inogara uye tsono yekumisikidza isina tsono yakatsvedza uye ikadamburwa, mushonga wedhiragi haugone kuvimbiswa.
4 Kana uchibatanidza kune yepakati venous catheter, iyo sikuru-pane sirinji inogona kudzora njodzi yemweya embolism inokonzerwa nekubviswa
Zvakare, kune iyo luer-slip dhizaini, pane mukana wekudimbura uye kupaza panguva yekudhonza. Paunenge uchishandisa yekumisikidza chiteshi dhizaini, usachipuruzira zvakare chakasimba. Zvikasadaro sikuruwa inogona kutsemuka uye hazvizo nyore kubviswa, zvinozokanganisa kubatana kwacho.
Anthem inogadzira 1mL / 3mL luer-kukiya sirinjiuye inokwanisa kuzadzisa mahombe mahombe. Tiri kushanda kutenderera nguva nekutambanudza mitsetse yefekitori. Parizvino, isu takagamuchira makumi matanhatu emamirioni 1mL luer-kukiya sirinji maodha pasi rese. Ndokumbira kuti utibvunze isu kune chero emergency zvido. Yedu email ndeiyi: info@antmed.com